को संरचना विकिरण ... को संरचना र रेडियोधर्मी radiations को विशेषताहरु समावेश हुन सक्छ
आणविक विकिरण - सबैभन्दा खतरनाक एक। यसको प्रभाव व्यक्ति लागि अप्रत्याशित छन्। रेडियोधर्मिता को अवधारणा के अर्थ छ? द्वारा "प्रमुख" वा "सानो" रेडियोधर्मिता के अर्थ छ? आणविक विकिरण को विभिन्न प्रकारका भाग कुन कणहरु छन्?
रेडियोधर्मिता के हो?
को विकिरण को संरचना विभिन्न कणहरु समावेश हुन सक्छ। तथापि, विकिरण को सबै तीन प्रकार नै श्रेणी हौं - तिनीहरूले ionizing भनिन्छ। यो अवधि अर्थ के हो? त्यसैले धेरै विकिरण एक निश्चित अणु पुगेपछि, यो आफ्नो कक्षा देखि एक इलेक्ट्रन बाहिर घचघच्याउनुहुन्छ भनेर - यो विकिरण ऊर्जा अविश्वसनीय उच्च छ। त्यसपछि एटम, लक्षित विकिरण भएको छ जो सकारात्मक आरोप लगाएको छ जो एक आयन रूपान्तरित भएको छ। ionizing भनिन्छ परमाणु विकिरण, यो कुनै पनि प्रकारको गर्न belonged किन जो छ। उच्च प्रदर्शन ionizing विकिरण जस्तै माइक्रोवेव वा इन्फ्रारेड अन्य प्रजाति, भिन्न हुन्छ।
कसरी ionized छ?
को विकिरण को भाग हुन सक्छ कुरा बुझ्न, यो विस्तार आयनीकरण प्रक्रिया विचार गर्न आवश्यक छ। निम्नानुसार यो आय। एक सानो अफीम बीउ (परमाणविकन्यूक्लियस) बबल को खोल जस्तै यसको इलेक्ट्रॉनों को orbits घेरिएको जस्तो देखिन्छ वृद्धि संग परमाणु। जब रेडियोधर्मी क्षय हुन्छ, कर्नेल यो सानो स्पेक देखि बन्द लिन्छ - अल्फा वा बेटा कणहरु। चार्ज कणहरु को उत्सर्जन र परिवर्तन गर्दा नाभिक को शुल्क, र यो नयाँ रासायनिक पदार्थ गठन गरिएको छ भन्ने हो।
निम्नानुसार कि माथि विकिरण व्यवहार बनाउन कणहरु। कोर अन्न अगाडि विशाल गति संग भागने देखि जारी। आफ्नो बाटो मा अर्को परमाणु को खोल मा दुर्घटनामा गर्न सक्नुहुन्छ, र बस यसलाई बाहिर एक इलेक्ट्रन ढक्ढकाउँछु। पहिले नै उल्लेख रूपमा, बारी मा एक यस्तो अणु आयन चार्ज। तर, यो मामला मा, पदार्थ नै नाभिक मा प्रोटन को संख्या अपरिवर्तित रहेका रूपमा रहनेछ।
को रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रियाको सुविधाहरू
यी प्रक्रियाहरू ज्ञान सम्भव जो तीव्र रेडियोधर्मी क्षय गर्न हदसम्म आकलन बनाउँछ। यो मूल्य becquerels मा मापन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, एक सेकेन्डमा एक क्षय छ भने तिनीहरू भन्छन्: "यो आइसोटप को गतिविधि - 1 becquerel।" एक पटक ठाउँमा एक एकाइ प्रयोग गरेर यो एकाइ क्यूरी भनिन्छ। यो 37 अर्ब becquerels बराबर थियो। यसरी यो पदार्थ को नै रकम को गतिविधि तुलना गर्न आवश्यक छ। को आइसोटप को गतिविधि विशिष्ट एकाइ ठूलो विशिष्ट गतिविधि भनिन्छ। यो मूल्य गर्न inversely समानुपातिक छ आधा-जीवन एक विशेष आइसोटप को।
रेडियोधर्मी radiations को कैरेक्टराइजेशन। आफ्नो स्रोतबाट
Ionizing विकिरण मात्र होइन रेडियोधर्मी क्षय को मामला मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। fission प्रतिक्रिया (को विस्फोट वा आणविक रिएक्टर को भित्र मा जा), तथाकथित प्रकाश केन्द्रक को संश्लेषण (सौर सतह, अन्य तारा हुन्छ, र एक हाइड्रोजन बम मा), र विभिन्न: को रेडियोधर्मी विकिरण गर्न सक्छन् लागि स्रोतको रूपमा सेवा कण गतिवर्धकपरिवर्तनगरियो। विकिरण यी सबै स्रोतहरू साधारण मा एक कुरा - एक शक्तिशाली ऊर्जा स्तर।
को विकिरण प्रकार अल्फा भाग कुन कणहरु छन्?
अल्फा, बिटा र गामा - - ionizing विकिरण तीन प्रकारका बीच मतभेद आफ्नो प्रकृति छन्। यी radiations पत्ता थिए, कुनै एक तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कुनै पनि विचार थियो। त्यसकारण, तिनीहरूले बस ग्रिकवर्णानुक्रम भनिन्छ।
आफ्नो नाम implies रूपमा, अल्फा-रेज पहिलो पत्ता थिए। तिनीहरूले यस्तो युरेनियम वा थोरियम रूपमा भारी आइसोटपहेर्नुहोस् को क्षय देखि विकिरण को भाग थिए। आफ्नो प्रकृति समय निर्धारण गरिएको थियो। वैज्ञानिकहरूले अल्फा विकिरण बरु भारी छ कि पाएका छन्। हावा, यो पनि केही सेन्टिमिटर छैन हटाउन सकिन्छ। यो विकिरण को एक भाग हेलियम अणुहरु को नाभिक प्रविष्ट गर्न सक्छ भन्ने फेला परेन। यसलाई अल्फा विकिरण सम्बन्धित छ।
रेडियोधर्मी आइसोटपहेर्नुहोस् यसको मुख्य स्रोत। अर्को शब्दमा, यो एक सकारात्मक चार्ज दुई प्रोटन को "सेट" र न्युट्रोन को नै नम्बर हो। यस मामला मा हामी संरचना एक विकिरण-कण वा अल्फा कणहरु समावेश भन्छन्। दुई प्रोटन र दुई न्युट्रोन एक हेलियम नाभिक, अल्फा-विकिरण विशेषता गठन। मानिसजातिको यस्तो प्रतिक्रिया मा पहिलो पटक रदरफोर्डले प्राप्त गर्न सक्छ लागि, कर्नेल मा नाइट्रोजन अक्सिजन केन्द्रक रूपान्तरण संलग्न।
बिटा विकिरण, पछि पत्ता, तर कुनै कम खतरनाक
त्यसपछि यो विकिरण को संरचना हेलियम को मात्र होइन नाभिक, तर साधारण इलेक्ट्रॉनों समावेश हुन सक्छ बाहिर गरियो। यो बेटा विकिरण लागि साँचो छ - यो इलेक्ट्रॉनों हुन्छन्। तर आफ्नो गति अल्फा विकिरण को दर भन्दा धेरै ठूलो छ। विकिरण यस प्रकार र अल्फा विकिरण भन्दा तल्लो शुल्क छ। अभिभावक अणु बिटा कणहरु देखि एक फरक शुल्क र विभिन्न गति "हकदार"।
यसलाई हल्का गति 100 हजार। किमी / सेकेन्ड अप पुग्न सक्छ। तर बाहिर बिटा विकिरण धेरै मीटर फैलियो सकेन। आफ्नो क्षमता तीक्ष्ण धेरै सानो छ। बिटा-रेज कागज, कपडा, धातु को पातलो पाना हटाउन सक्दैन। तिनीहरूले मात्र यो कुरा मा भित्र पस्नु। तथापि, असुरक्षित जोखिम पराबैंगनी किरण साथ मामला छ रूपमा, छाला वा आँखा बल्न सक्छ।
नकारात्मक चार्ज बिटा कणहरु इलेक्ट्रॉनों भनिन्छ र सकारात्मक चार्ज positrons भनिन्छ। बिटा विकिरण को एक ठूलो संख्या मानिसहरूलाई धेरै खतरनाक छ र विकिरण रोग हुन सक्छ। धेरै खतरनाक radionuclides को इन्जेशन हुन सक्छ।
गामा रेज: संरचना र गुण
निम्न गामा विकिरण पत्ता थियो। यस मामला मा, यो विकिरण को एक भाग एक विशेष तरङलम्बाइ को फोटोन समावेश हुन सक्छ बाहिर गरियो। गामा विकिरण पराबैंगनी, इन्फ्रारेड रेडियो छालहरू जस्तै। अर्को शब्दमा, यो विद्युत विकिरण प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर यो आगमन फोटोन ऊर्जा धेरै उच्च छ।
विकिरण यस प्रकारको कुनै पनि obstructions मार्फत भित्र पस्नु गर्न अत्यन्तै उच्च क्षमता छ। को denser विकिरण सामाग्री ionizing को बाटो मा खडा छ, यो राम्रो यो खतरनाक गामा रेज पकड गर्न सक्छन्। यो भूमिका लागि, अक्सर नेतृत्व वा ठोस निर्वाचित। आउटडोर गामा विकिरण सजिलै किलोमिटर सयौं र हजारौं पास गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक व्यक्ति प्रभावित भने, यो छाला र आन्तरिक अङ्गहरू गर्न क्षति हुन्छ। गामा विकिरण को गुण मा एक्स-रे संग तुलना गर्न सकिन्छ। तर तिनीहरूले मूल भिन्न। एक्स-रेज पछि मात्र कृत्रिम अवस्थामा छन्।
को विकिरण के भन्दा खतरनाक छ?
पहिले नै सिकेका केही रेज गर्ने विकिरण को भाग हो ती धेरै, हामी गामा रेज को खतराबाट को विश्वस्त छन्। आखिर, तिनीहरूले सजिलै धेरै किलोमिटर, जीवन जलाएर र भयानक विकिरण रोग पैदा हटाउन सक्नुहुन्छ। यो गामा रेज विरुद्ध सुरक्षाको लागि हो, आणविक रिएक्ट्र्स विशाल ठोस पर्खाल कमै मात्र छन्। को आइसोटपहेर्नुहोस् को सानो टुक्रा सधैं नेतृत्व बनेको कन्टेनर मा राखिनेछ। तथापि, मानिसहरूलाई मुख्य खतरा खुराक छ।
खुराक - यो सामान्यतया खातामा मानव शरीर को वजन लिएर गणना छ कि मात्रा हो। उदाहरणका लागि, दबाइ को एक रोगी खुराक को लागि2मिलीग्राम भेट्नुपर्छ हुनेछ। अर्को लागि, एउटै खुराक एक प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। बस अनुमान र विकिरण को खुराक। यसको खतरा अवशोषित खुराक निर्धारण गरिन्छ। यसलाई परिभाषित गर्न, पहिले शरीर द्वारा अवशोषित गरिएको विकिरण को मात्रा मापन। र त्यसपछि यो नम्बर शरीरको वजन संग तुलना गरिएको छ।
विकिरण को खुराक - यसको खतराबाट को मापदण्ड
विकिरण विभिन्न प्रकारका फरक हानिकारक जीवित जीव हुन सक्छ। त्यसैले विकिरण को विभिन्न प्रकार र आफ्नो हानिकारक प्रभाव को मर्मज्ञ क्षमता भ्रममा असम्भव छ। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति विकिरण विरुद्ध सुरक्षा गर्न कुनै तरिका छ जब, अल्फा विकिरण बढी खतरनाक गामा रेज छ। यो भारी हाइड्रोजन केन्द्रक हुन्छन् किनभने। अल्फा विकिरण र प्रदर्शन खतरा रूपमा एक यस्तो प्रकार मात्र जब शरीर भित्र राख्नुभयो। त्यसपछि आन्तरिक जोखिम छ।
तसर्थ, विकिरण को एक भाग कणहरु को तीन प्रकारका समावेश हुन सक्छ: एक हेलियम नाभिक, पारंपरिक इलेक्ट्रॉनों र एक विशेष तरङलम्बाइ को फोटोन छ। विकिरण को एक विशेष प्रकारको खतरालाई यसको खुराक निर्धारण गरिन्छ। यी रेज को मूल कुरा छैन। जीवित जीव लागि बिल्कुल विकिरण जहाँ plucked कुनै फरक छ: यो एक्स-रे मेसिन, सूर्य, आणविक पावर प्लान्ट, रेडियोधर्मी स्पा वा विस्फोट हुन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - धेरै खतरनाक कणहरु अवशोषित थिए कसरी।
को आणविक विकिरण कहाँ गर्छ?
प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण संग, मानव सभ्यता विकिरण ionizing धेरै artificially गरे खतरनाक स्रोतहरू बीचमा अवस्थित गर्न बाध्य छ। अक्सर यो एक भयानक दुर्घटना को परिणाम हो। उदाहरणका लागि, आणविक पावर प्लान्ट "फुकुशिमा-1" सेप्टेम्बर 2013 मा एक प्रकोप रेडियोधर्मी पानी लिक गरायो। फलस्वरूप, वातावरण मा स्ट्रोनटियम र सीजियम आइसोटपहेर्नुहोस् सामग्री एकदम हुर्किसकेका छ।
जापानी औसत वृद्धि: डाटा एक तुलना। जापानी खाद्यवस्तुको
मानसिक: द शब्द र यसको constituents को मूल्य
गाढा कुरा के हो? कि गाढा कुरा अवस्थित?
परिवारको सामाजिक स्थिति - यो के हो? परिवारको सामाजिक स्थिति: उदाहरणहरू
स्तनधारी हुन् र तिनीहरूले अन्य जनावर फरक कसरी?
त्यो बच्चा 10 महिना गर्न सक्षम छ - विकास
व्यक्तिगत उद्यमीहरू लागि वर्तमान खाता: एक आवश्यकता वा राम्रो वाहेक?
भत्ता र ज्याला गर्न थप भुक्तानी। हानि लागि surcharge। कर्मचारी बोनस प्रणाली
Vertikutter लन बिजुली र पेट्रोल: समीक्षा
बजार अर्थव्यवस्था प्रणाली। बजार संरचना: प्रकार र परिभाषित विशेषताहरु
Solovetsky द्वीप र यसको आकर्षण। कसरी Solovetsky द्वीप प्राप्त गर्न, हेर्न गर्न
माइक्रोसफ्ट Lumia 550 स्मार्टफोन: मालिकको समीक्षा